भोलि साउन ८ गते शुक्रबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ! - kageshworikhabar.com
भोलि साउन ८ गते शुक्रबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
भोलि मिति वि. सं. २०७८ साल श्रावण ८ गते। शुक्रबार । तपाईंको भोलिको राशिफल
सोचेको काम सामयमा सकिने छ । धार्मिक तथा मांगलिक कार्यमा सहभागी भइने छ । व्यक्तित्वमा सुधार हुनेछ । बाबुसंगको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ। धार्मिक कार्यमा रुची बढ्ने छ ।
काम समयमा सम्पन्न नहुँदा निरास हुन सकिन्छ । कार्य सम्पन्न हुन समय लाग्ने छ । खानपानको कारण स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । नयाँ कार्यको लागि समय उचित रहेको छैन। यात्रामा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। कामको चाप बढ्नाले थकान महसुस हुनेछ। योग साधना गर्नाले मनमा शान्ति छाउने छ।
दिनको सुरुवात जोश जाँगरको साथ हुनेछ। साथी भाइ तथा आफन्तको साथमा पार्टी तथा पिकनिकमा सहभागी भइने छ । नयाँ वस्त्र तथा वाहनको खरिदको योग बानेको छ । मन आनन्द हुनेछ । विपरित लिंगी प्रति आकर्षण बढ्ने छ । समाजमा मन सम्मान बढ्ने छ । दाम्पत्य जीवनको शुख प्राप्त हुनेछ ।
चिन्ता मुक्त हुँदा मन खुशी हुनेछ। परिवारका सदस्यसँग बिशेष समय व्यतित हुनेछ। कार्यमा लाभ हुनेछ । नोकरीमा फाइदा हुनेछ। साथिको सहयोग मिल्ने छ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूको चाल बेकार हुनेछ।
स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । मिल्ने साथि सँग भेट हुनेछ । सन्तान प्राप्तिको योग बन्नेछ। विद्यार्थीहरूको लागि धेरै राम्रो समय रहेको छ । केहि धार्मिक कार्यमा सहभागी भइने छ । आध्यात्मिकता बढ्नेछ।
केहि कठिन समयको सामना गर्न पर्ने हुनसक्छ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । मनमा चिन्ता बढ्ने छ । आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। आफन्त सँग वादविवाद बढ्न सक्छ । आत्म-सम्मान ठेस पुग्न सक्ने हुदा सचेत रहनु होला । वाहन खरिद तथा बिक्रीको लागि समय उचित रहेको छैन।
नयाँ कार्यको थालनीको लागि समय अनकुल रहेको छ । भाग्य वृद्धि तथा धन लाभको योग रहेको छ । पारिवारिक कार्यमा यात्राको योग रहेको छ । नजिकैको स्थानमा धार्मिक कार्यको आयोजना हुनसक्छ। विदेशबाट शुभ समाचार मिल्नेछ । भाइ-भाइको सम्बन्धमा मधुरता छाउने छ । आफुलाई पूर्ण रुपमा स्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ ।
सन्तान शुख प्राप्त हुनेछ। घरमा मित्रको आगमन हुनेछ। मिष्टान्न् भोजन हुनेछ । धार्मिक कार्यमा खर्च हुनेछ । बोलिको प्रभावको कारण मानिषहरुलाई प्रभातित गर्न सक्नुहुनेछ। धन प्राप्तिको योग बनेको छ । बिद्यार्थीहरुको लागी सफलता मिल्ने योग बनेको छ ।
स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । पढाइमा सफलता प्राप्त हुनेछ।आफ्नो हातबाट धार्मिक तथा मांगलिक कार्य हुनेछ। आर्थिक लाभ हुनेछ । जीवन साथिबाट सुख तथा आनन्द प्राप्त हुनेछ। मान सम्मान बढ्ने छ । मनपर्ने भोजन हुनेछ।
स्वास्थ्यम समस्या आउनेछ। मनमा चोट पुग्ने छ । व्यवसायमा सरकारे हस्तक्षेप हुनसक्छ। धार्मिक कार्यमा धन खर्च हुनसक्छ। शत्रु सक्रिय हुनसक्छन । आँखामा समस्य आउनसक्छ। भयको सम्भावन भएको हुदा सचेत रहनुहोला ।
मांगलिक कार्य गर्नको लागी अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ । अविवाहितको लागि विवाहको योग बन्न सक्छ। सन्तान प्राप्तिको योग बनेको छ। दाम्पत्य जीवनमा शुख शान्ति छाउने छ । नोकरी तथा व्यवसायमा लाभ हुनेछ। वाहनको खरिद हुनसक्छ।
गरेका कार्य सफल प्राप्त हुनेछन् । नोकरी तथा व्यवसायमा पद बढ्ने छ । व्यापारमा लाभ हुनेछ। पिता तथा बुज्रुक बाट लाभ हुनेछ। सरकारी लाभ हुनेछ । सामाजिक सम्मान बढ्ने छ। दाम्पत्य जीवनमा शुख शान्तिको अनुभव गर्नुहुनेछ ।
Previous articleनिर्माण व्यवसायीसँग सहकार्य हुन्छ : अर्थमन्त्री
Next articleअहिले कालो बादल मडारिएको छ, त्यो बादललाई हटाएर अगाडि बढ्नुपर्छ : वरिष्ठ नेता नेपाल